မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ မေတ္တာအတွက် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ စုလှိုင်နှင်း - Cele Connections
မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ မေတ္တာအတွက် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ စုလှိုင်နှင်း
kyaw | 02/10/2019 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ ဗီဒီယိုခေတ်ဦးကာလမှာ ချစ်စရာအပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သူတွေထဲမှာ စုလှိုင်နှင်းလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် ။ စုလှိုင်နှင်းတစ်ယောက် အနုပညာအလုပ်တွေခြေလှမ်းကျဲသွားပေမယ့် သူယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားအလုပ်တွေကို ပိုမိုပြုလုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
မနေ့က ကျရောက်လာခဲ့တဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြသူတွေအတွက် စုလှိုင်နှင်း က လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေ ကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ “အခုနောက်ပိုင်း လိုင်းပေါ်မတက်တာကြာနေပြီ မွေးနေ့တောင် ပိတ်ထားတာ ဖွင့်ထားရင် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို စာမပြန်ဖြစ်မှာစိုးလို့ လက်မထောင်ပြီး အသဲပေး တာလေးလည်းမလုပ်ချင်ဖူး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်နဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မန့်လေးပြန်ရေးပေးချင်တာ.., အခုတော့ မနှစ်က birthday ဆုတောင်းတွေ ပြန်တက်လာတာမြင်တော့ ကျမ fb က ပရိတ်သတ်တွေ မိတ်ဆွေတွေက ဆုတောင်းပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….
ကျမရဲ့ မွေးနေ့ကို ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်များနှင့်တကွ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်….စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာနှင့်ပြည့်စုံပြီး ကောင်းကျိုးချမ်းသာ လိုရာဆန္ဒ မှန်သမျှ ပြည့်ဝကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်….” ဆိုပြီးရေးသားထားတာပါ ။
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေဆိုတာ အနုပညာအလုပ်တွေအဆက်ပြတ် နေတဲ့တိုင် အားပေးနေမြဲ ၊ ချစ်နေမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ စုလှိုင်နှင်း ကို သတိရတဲ့ သူတွေရှိသေးရင် မှတ်ချက်ကနေတစ်ခုခုပြောဆိုပေးခဲ့ပါဦး ။
Source – Su Hlaing Hnin
ပရိသတျကွီးရေ ဗီဒီယိုခတျေဦးကာလမှာ ခဈြစရာအပွုံးခြိုခြိုလေးတှနေဲ့ ပရိသတျအာရုံကို ဖမျးစားနိုငျခဲ့သူတှထေဲမှာ စုလှိုငျနှငျးလညျး အပါအဝငျဖွဈပါတယျ ။ စုလှိုငျနှငျးတဈယောကျ အနုပညာအလုပျတှခွေလှေမျးကြဲသှားပမေယျ့ သူယုံကွညျရာ ဘာသာတရားအလုပျတှကေို ပိုမိုပွုလုပျနတော တှရေ့ပါတယျ။
မနကေ့ ကရြောကျလာခဲ့တဲ့ မှေးနလေ့ေးမှာ ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွသူတှအေတှကျ စုလှိုငျနှငျး က လူမှုကှနျရကျပျေါကနေ ကြေးဇူးတငျစကားပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ “အခုနောကျပိုငျး လိုငျးပျေါမတကျတာကွာနပွေီ မှေးနတေ့ောငျ ပိတျထားတာ ဖှငျ့ထားရငျ မှေးနဆေု့တောငျးပေးတဲ့ ပရိတျသတျတှနေဲ့ မိတျဆှတှေကေို စာမပွနျဖွဈမှာစိုးလို့ လကျမထောငျပွီး အသဲပေး တာလေးလညျးမလုပျခငျြဖူး မှေးနဆေု့တောငျးပေးတဲ့ ပရိတျသတျနဲ့ မိတျဆှတှေကေို ကြေးဇူးတငျပါတယျဆိုတဲ့ မနျ့လေးပွနျရေးပေးခငျြတာ.., အခုတော့ မနှဈက birthday ဆုတောငျးတှေ ပွနျတကျလာတာမွငျတော့ ကမြ fb က ပရိတျသတျတှေ မိတျဆှတှေကေ ဆုတောငျးပေးကွတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ….
ကမြရဲ့ မှေးနကေို့ ဆုတောငျးပေးကွတဲ့ ပရိတျသတျမြားနှငျ့တကှ မိတျဆှေ သူငယျခငျြးမြားအားလုံး ကိုကြေးဇူးတငျပါတယျရှငျ….စိတျခမျြးသာ ကိုယျကမျြးမာနှငျ့ပွညျ့စုံပွီး ကောငျးကြိုးခမျြးသာ လိုရာဆန်ဒ မှနျသမြှ ပွညျ့ဝကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျး တောငျးပေးပါတယျ….” ဆိုပွီးရေးသားထားတာပါ ။
ပရိသတျတှခေဈြကွတဲ့အနုပညာရှငျတှဆေိုတာ အနုပညာအလုပျတှအေဆကျပွတျ နတေဲ့တိုငျ အားပေးနမွေဲ ၊ ခဈြနမွေဲဖွဈပါတယျ။ ကဲ စုလှိုငျနှငျး ကို သတိရတဲ့ သူတှရှေိသေးရငျ မှတျခကျြကနတေဈခုခုပွောဆိုပေးခဲ့ပါဦး ။
“ပရိသတ်တွေအတွက် ချစ်ညီမနိုင်ဖြိုးဥနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ငယ်ဘဝအမှတ်တရလေးတွေကို ချပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု”
ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ပြောတဲ့သူတစ်ယောက်ကြောင့် ရှက်ပြုံးလေးပြုံးနေရတဲ့ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို
“ဘာမှမပြင်ဆင်ထားပဲ ရေစိုနေရင်းတောင် ချောမော လှပလွန်းနေတဲ့ သံသာမိုးသိမ့်”